Tag: Sehatra ho an'ny mpanjifa | Martech Zone
Tag: Sehatra ho an'ny mpanjifa
Tsy nahomby ny fampanantenanao manokana. Nandritra ny taona maro dia nandre momba ny tombony azo tsapain-tànana isika, ary ny mpivarotra mitady ny hanararaotra azy dia nividy vahaolana lafo vidy sy sarotra ara-teknika, nefa tara loatra vao mahita fa, ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fampanantenan'ny olona manokana dia kely fotsiny noho ny setroka sy fitaratra. Ny olana dia manomboka amin'ny fomba fahitana ny personalization. Napetraka ho vahaolana ho an'ny orinasa, namboarina tamin'ny alàlan'ny mason'ny famahana ny filan'ny orinasa raha tena izy
Talata, Novambra 10, 2020 Alarobia, Novambra 11, 2020 Tom Treanor
Mora ny mieritreritra fa amin'izao vanim-potoana mampatahotra ankehitriny izao, ny CxO dia tsy vonona hanao fampiasam-bola lehibe amin'ny marketing sy data an'ny orinasa. Saingy nahagaga fa mbola liana izy ireo, ary mety noho izy ireo efa nanantena ny fitotonganana, fa ny fanantenana valisoa amin'ny fahazoana ny fikasan'ny mpanjifa sy ny fitondran-tenany dia zava-dehibe loatra ka tsy raharahina. Ny sasany aza manafaingana ny tetikasan'izy ireo ho an'ny fanovana nomerika, miaraka amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa
RudderStack: Manamboara sehatra manokana momba ny angona mpanjifa (CDP)
Zoma, Oktobra 16, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 15, 2020 Douglas Karr
RudderStack dia manampy ny ekipa injeniera momba ny angona hisambotra lanja bebe kokoa amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa, miaraka amin'ny Customer Data Platform (CDP) natao manokana ho an'ny mpamorona. RudderStack dia manangona angon-drakitra avy amin'ny toeram-pandraisana mpanjifa rehetra - anisan'izany ny tranonkala, ny finday ary ny rafitra backend - ary mandefa azy io amin'ny fotoana tena izy ho any amin'ny toerana 50 misy rahona sy trano fitehirizana angona lehibe. Amin'ny alàlan'ny fampiraisana sy famakafakana ny angon-drakitra mpanjifany amin'ny fomba miafina- sy fahatsiarovan-tena amin'ny fiarovana, ireo orinasa dia afaka mamadika azy ho hetsika asa aman-draharaha